"""डा. केसीले सुशासनका नाममा शुरु गरेको अनशन सुशासनकै ऐनविपरीत""" - Makalukhabar.com
“””डा. केसीले सुशासनका नाममा शुरु गरेको अनशन सुशासनकै ऐनविपरीत”””
काठमाडौँ, साउन ६ । नेपालको संविधानले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि मौलिक हकमा राखिएको स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर सोही हकको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको पछिल्लो प्रमाण त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्रा डा गोविन्द केसीको अस्पतालमा आधारित ‘अनशन’ बनेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका नाममा पटक पटक आमरण अनशनमा बस्दै आउनुभएका प्रा डा केसीले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक हनन गरिरहेका छन् । सरकारी अस्पताल बन्द छन् । बिरामी उपचार नपाएर मर्दैछन् । निजी क्षेत्रका महँगा क्लिनिक र अस्पतालमा तिनै केसी समर्थक चिकित्सकहरु काम गरिरहेका छन् ।
अधिकारका नाममा नीतिनियम कुल्ची राजनीतिक आड लिएर कानूनतः सरकारी कर्मचारी अनशन बसेर नभई स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्नुपर्ने र आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गर्नुपर्ने पाठकको ठम्याइ छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सरकारी कर्मचारी कानूनविपरीत तरिकाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने हकलाई बन्देज गरेर अनशन बस्नु सही नभएको उल्लेख गर्दै भने, “एउटा जिम्मेवार स्वास्थ्य संस्थामा बसेर ऐन/नियमविपरीत नागरिकलाई असर पर्ने गरी काम गर्नुहुँदैन, स्वास्थ्य सुधारका नाममा सोही संस्थामै आबद्ध भएर अनशन बस्नु कानूनी रुपमा मिल्दैन, डा केसीले पदीय मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नु परेमा आफ्ना माग शान्तिपूर्वक राख्नुपर्ने र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।
त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भनिएको छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।’ प्रा डा केसीले सुशासनका नाममा शुरु गरेको अनशन सुशासनकै ऐनविपरीत छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने गर्नुपर्छ ।’सोही ऐनको पालना गर्नुपर्ने प्रा डा केसीले भने त्रिविको कानूनको आफैँ ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् ।
आफ्ना माग राख्दा अनशन नै बसेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मानिँदैन । विश्व मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना माग राख्दा मान्छे आफैँ आमरण अनशन बस्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको छ । एम्नेष्टी नेपाल शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने,“कोही पनि मान्छे आमरण अनशन बसेर माग राख्नु हुँदैन, जुन आफूले आफ्नै अधिकार हनन गरेको भन्ने बुझिन्छ ।” उनले आफ्ना माग राख्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाइन्छ तर अनशन बसेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरे ।